Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်)
Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
angiotensin converting enzymeကို တားမြစ်ပေးတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေနဲ့ အသက်အနည်းဆုံး၆နှစ်အရွယ်ကလေးတွေအတွက် သွေးတိုးရောဂါကိုကုသဖို့သုံးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ နှလုံးညှစ်အားနည်းရောဂါကုသဖို့ သို့ နှလုံးရောဂါလူနာတွေမှာ အသက်ရှင်နိုင်ဖို့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆေးညွှန်းစာအတိုင်း အကုန်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေရနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆေးပမာဏအများကြီး သို့ အနည်းငယ် သို့ အချိန်ပိုပြီးမသုံးသင့်ပါဘူး။ ဆေးအသုံးပြုနေချိန်မှာ ရေအများကြီးသောက်ပေးပါ။
အစာနဲ့တွဲပြီး သို့ အစာမပါဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပမာဏတိုင်းတာတဲ့ပြွန် သို့ ဇွန်းသို့ ခွက်ကိုအသုံးပြုပြီး ဆေးအရည်ကိုတိုင်းတာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းတာနိုင်ဖို့ကိရိယာတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူထံမှာ တောင်းနိုင်ပါတယ်။
Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Lisinopril သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
သွေးပေါင်မကြာခဏချိန်ပေးဖို့ လိုသလို သွေးခဏခဏစစ်ပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။
အော့အန်ခြင်း သို့ ဝမ်းလျှောခြင်းတွေ သို့ သာမန်ထက်ချွေးပိုထွက်ခြင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်တအားကျသွားခြင်း၊ electrolyteကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းတွေကိုဆက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင် Lisinoprilအသုံးပြုနေရကြောင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ သင့်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး သွေးဖိအားအတွက်ဆေးတွေ သုံးဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
မျိုးရိုးအလိုက်ပါလာတဲ့ သွေးကြောတုန့်ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့
ဆီးချိုရောဂါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် aliskiren ပါတဲ့ဆေးတွေနဲ့ တွဲမသုံးသင့်ပါဘူး။ (Amturnide, Tekturna, Tekamloကဲ့သို့သောဆေးများ)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆီးနည်းခြင်း သို့ ဆီးလုံးဝမသွားခြင်း
ပိုတက်ဆီယမ်များခြင်းကြောင့် မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးခြင်း သို့ မူမမှန်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ လှုပ်ရှားမရခြင်း
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြဿနာများ ဆီးနည်းခြင်းဆီးလုံးဝမသွားခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင်နာခြင်း ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ ခြေထေက်ခြေချင်းဝတ်များဖောရောင်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း အသက်ရှူမြန်ခြင်း
အသည်းဆိုင်ရာပြဿနာ်များ မအိမသာဖြစ်ခင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ အစားစားလိုစိတ်မရှိခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း ( အရေပြားသို့မျက်လုံးများဝါခြင်း)
အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အပြင်းအထန်ဗိုက်အောင့်ခြင်း ၊အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းများ ဖောရောင်ခြင်းစတဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
A diuretic or “ water pill” ဆီးဆေး
Gold injections to treat arthritis အဆစ်ရောင်ရောဂါအတွက် ထိုးဆေး
အင်ဆူလင် သို့ ှဆီးချိုရောဂါအတွက် သောက်ဆေးများ
A potassium supplement ပိုတက်ဆီယမ်ဖြည့်စွက်စာ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ကျောက်ကပ်ရောဂါ ( သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်သန့်စင်မှုလုပ်နေစဉ်)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်း -10 mgသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၊5mgသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ပမာဏ- 20 to 40 mgသေက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ -80 mgသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
အစောပိုင်း- 2.5 TO5MGတစ်နေ့တစ်ကြိမ် သောက်ဆေး
ရောဂါထိန်းသိမိးရန်ပမာဏ- ဆေးမတိုးတော့ းတာမျိုးတွေကြောင့် ပမာဏတိုးပေးသင့်ပါတယ်။
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ- တစ်နေ့တစ်ကြိမ်40 MGသောက်ဆေး
အစောပိုင်း-5MGသေက်ဆေး ( ကြွက်သားပုပ်ပြီးပြီးူချင်း ၂၄နှာရီအတွင်း )
ဆက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ -5 MGသောက်ဆေး ၂၄နှာရီပြီးနောက်ပိုင်း၊ 10 MG သောက်ဆေး ၄၈နာရီကြာပြီးနောက်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ပမာဏ -10 MG သောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်၊ အနည်းဆုံး၆ပတ်ဆက်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အစောပိုင်း -10 TO 20 MGသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ပမာဏ- 20 TO 40 MGသောက်ဆေးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်
၃ရက်တိုင်းမှာ ဆေးပမာဏချိန်ညှိခြင်း လုပ်သင့်ပါတယ်။
အစောပိုင်း- 2.5 TO5MGသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ပမာဏ- တစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အကြား တစ်နေ့ 2.5 MG TO5MGတိုးပေးသင့်ပါတယ်။
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ -40 MGသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ြကိမ်
ကလေးတွေအတွက် Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်း -0.07 MG/KGသောက်ဆေး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် (အများဆုံးပမာဏ5MGတစ်နေ့တစ်ကြိမ်)
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ပမာဏ -တစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အကြား သွေးပေါင်ချိန်အပေါ်မူတည်ပြီး ပမာဏကိုချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ -0.61 MG/KGအထက် သို့
40 MGအထက် မသုံးသင့်ပါဘူး။
Lisinopril (လိုင်ဆင်နိုပရေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား 2,5MG; 5MG; 10MG; 20MG